नेपाल आज | एसिया कप क्रिकेट युएईमा हुने, नेपालले पनि छनोट खेल्ने
एसिया कप क्रिकेट युएईमा हुने, नेपालले पनि छनोट खेल्ने
बुधबार, २८ चैत २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । भारतमा हुने तय भएको एसिया कप क्रिकेटको प्रतियोगितास्थल न्युट्रल भेन्युको रूपमा रहँदै आएको युएईमा सारिएको छ। सबै देश सहभागिता जनाउन् भन्ने उद्देश्यसाथ भेन्यु परिवर्तन गरिएको हो।
भारतमा हुने प्रतियोगितामा पाकिस्तान सहभागी नहुने तथा राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहको चपेटामा क्रिकेट पर्ने भन्दै त्यसबाट माथि राख्न युएईमा प्रतियोगिताको तयारी गरिएको एसिसीले जनाएको छ। प्रतियोगिता आगामी सेप्टेम्बर १३ देखि २८ सम्म युएईमा हुने जनाइएको छ।
गत वर्ष भएको यू-१९ एसिया कप पनि भारतबाट मलेसियामा सरेको थियो। पाकिस्तान र भारतबिचको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार दुवै देशका क्रिकेटरहरूमाथि पर्दै आएको छ। एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान र छनोट चरणपर्ने १ टिम गरी ६ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
नेपाल छनोट खेल्दै
एसियाकपका लागि नेपाल छनोट प्रतियोगिता खेल्दै छ। युएई, हङकङ, नेपाल, सिंगापुर, मलेसिया र ओमानबीच एसियाकपमा सहभागिताका लागि प्रतिस्‍पर्धा हुने छ।
शीर्ष स्थानमा रहने टिमले एसियाकपमा मौका पाउनेछ। छनोट प्रतियोगिता सेप्टेम्बरमा भारतमा हुँदै छ। नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएपछि यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा रहनेछ।
यद्धपि, त्यसअघि पनि केही मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजनाको सम्भावना भने कायम छ। तत्कालका लागि भने कुनै पनि खेलको योजना बनिसकेको छैन। छनोटको युएईविरुद्धको खेल नेपालका लागि पहिलो एकदिवसीय अन्त्रर्राष्ट्रिय खेल हुनेछ।
नेपाल एसिया कप क्रिकेट
चेन्नईविरुद्ध हैदरावाद ब्याटिङमा, शकिब अल हसनलाई मौका
५ खेलपछि धोनी र वार्नर आमनेसामने, कसले मार्ला बाजी ?
पञ्जावविरुद्ध दिल्ली बलिङ गर्दै, सन्दीप पनि टोलीमा
डडेल्धुरा बस दुर्घटना : मृतक पाँच जनाको सनाखत [अपडेट]
ठूला बैंक पनि मर्जरमा जान तयार, सरकारसँग राखे यस्तो शर्त
यस्ता छन् पसिनाका फाइदा र बेफाइदा
मान्छे राम्री भएर के गर्नु ? विप्लव समूहमा लागेपछि पक्राउ